माओबादी र फोरम संग एकता गर्न नयाँ शक्ति नेपालले थाल्यो यस्तो तयारी, के होला एमाले र माओबादीको एकता ?::सुनौलो न्यूज
माओबादी र फोरम संग एकता गर्न नयाँ शक्ति नेपालले थाल्यो यस्तो तयारी, के होला एमाले र माओबादीको एकता ?
त्यसबाहेक भनिएको छ, ‘दलहरुको संख्या धेरै भएर लोकतन्त्रबलियो हुने हैन । निश्चित वैचारिक धार र सवल संगठन भएका दलहरुबीचको स्वच्छ प्रतिस्पर्धाले मात्र लोकतन्त्र बलियो हुनसक्छ । यस अर्थमा नयाँशक्ति पार्टी, नेपाल सबै पक्षहरुसँग राजनीतिक संवादका लागि तयार छ । तर वैकल्पिक, अग्रगामी, प्रगतिशील, क्रान्तिकारी, लोकतान्त्रिक, समाजवादी ‘तेस्रो धु्रव’निर्माण गर्ने उद्देश्यत्यसको आधारभूतशर्त हो । तथा कथित पुँजीवादी वा साम्यवादी आवरणमा यो उद्देश्य परिपुर्ति नहुने यथार्थबारे नयाँशक्ति पार्टी उत्तिकै प्रष्ट छ ।’